Madax Gaabnida Qadar ka Qufacaysa Yaa Waaye?, Waa Bucuudo iyo Bacaadkii Xamar Weyne – Rasaasa News
Madax Gaabnida Qadar ka Qufacaysa Yaa Waaye?, Waa Bucuudo iyo Bacaadkii Xamar Weyne
May 27, 2009 Jwxo-shiil
Eebahay Janadii ha geeyee Sayyid Maxamed Cali Qablax oo ahaa Caalim Caaqil ah, ayaa la waydiiyey dad yaa u Caqli xun wuxuuna yidhi “kolba ruuxii aan ogayn waxa uu yahay”.
Waxaan Tuduc yar ka qoraynaa Bucuuda, waxaan filayaa in dadka ee bari ah kolka ay arkaan ama maqlaan magaca Bucuuda in ay xasuusan “Nooc Kaluun”, waase magac nin lagu naanaysay magac nooc kaluun ah.
Bucuuda hadaan idiin jilciyo, waa nin la ii sheegay in uu baryahan dambe la shaqeeyo kooxda Jwxo-shiil, waxaana uu ku biiray ama uu taageere u noqday kooxdan sanadkii 2006, mar uu Jwxo-shiil soo booqday wakiilkiisa Dubai Mustafe ee isagu xaaraanta ku haysta shirkada xawaalada ee KAAH. Waxaana uu ka codsaday in uu taageero uga raadiyo dalalka Carabta kooxda Jwxo-shiilada oo iyagu jecel dadka jooga meelaha ay xoogaa nolol ahi ka jirto si ay uga helaan tigidho ay ku dhoof dhoofaan.
Hadaba waa nin sidee ah MR, Bucuuda. Bucuuda waa nin reer xamar ah reer xamarnimada ka sokow waxaa uu ahaa dadkii xirfada mukhalasnimada xiliyadii sideetameeyadii meel sare ka gaadhay. Sida naloo sheegay waxaa uu lee yahay waxoogaa aqoon ah oo dhul ka kac ah iyo waliba afmaalnim, afmaalnimada Bucuudo ma ah mid xigmad ah ee waa mid xigmad la,aan ah oo u dhaw dhinaca ciyaalsuuqa, beentu waa shayga ugu xun ee lagu sifeeyo ruux, hadii uu ninku beenaale yahayna kutubta qaar baa shaki galiya reernimadiisa. Ma ah nin xishooda ama xurmeeya dadka ka mudan, waxaa intaas u dheer in uusan lahayn maskax ku filan oo uu ku kala sooco waxa u wanaagsan iyo waxa u xun.
Bulshada Somalida Ogadeeniya ee ka xoogsata Dooxa, Bucuuda kolka uu ka soo hor baxo way ka leexdaan, waadna garankartaa sharafta uu lee yahay ruux jidka looga leexdo kolka uu kaa soo hor baxo. Waxaa uu aad u aflagaadeeyaa odayaasha beesha uu ka soo jeedo oo aad sharaf ugu dhax leh beelaha Somalida Ogadeeniya, Bucudo kolka uu yimaado golayaasha ay ku kulanto bulshadu cid u gacan qaadaba waa loo gacan qaadaa.
Bucuudo arimaha uu Jwxo-shiil ku doortay ayey ka mid yihiin astaamaha kore. Waxaa uu kolkii ugu horeysay soo galay saaxada is daldalka siyaasad xumada ee kooxda Jwxo-shiil sanadkan, ka dib kolkii uu Axmed Saalax iskaga tagay kooxda talaabo xun, ayuu Jwxo-shiil bulshada ka dhex raadiyey caqli-gaabo uu xoogaa ku adeegto waana uu ka waayey, waxaa Bucuuda mar dame u keenay Mustafe.
Jwxo-shiil waxaa uu u sheegay in uu yahay hogaanka beenta ee kooxda, ileen been waxaa sheegi kara beenaale, Bucuudo ma kala yaqaano degmooyinka Jamhuuriyada Somaliya iyo kuwa Ogadeeniya. Waxaana uu jecel yahay in uu noqdo nin wax sheegay, wuxuu ka kaluumaystaa Ideecada Shabeele oo uu ka shaqeeyo nin ay ku wada dheeli jireen bacaadkii Xamar kolkii uu la baxay magaca Bucuuda waayo wuu kuftin badnaa sidaasina waxaa loogu duur xulay laf ma leh.
Bucuuda waan u yax-yaxaa kolka uu ideecadaha ka sheegayo war aanan garanaynin meel alaale meel uu ka keenay oo uu waliba yidhaahdo tuulo ku taal gabalada dhexe ee Somaliya waxaa ka dagaalamay kooxda Jwxo-shiil, oo aan ogayn intii ayna ku sifoobi Jwxo-shiilo ee ay ahaayeen Jwxo in ay Jabhadu ka dagaalami jirtay dhulka Somalida Ogadeeniya.
Waxaan Isweydiiyaa su,aal kolka aan maqlo Bucuuda oo leh tuulada Yamarug oo ku taal gabalka galgaduud isaga oo leh Jwxo-shiilada ayaa 50 Itobiyan ah ku dilay, waliba ma gudbe Abtidoon oo leh Jubba dalkeeynii waaye waana tagoo haynaa, ayaan isweydiiyaa goorma ayaa Nabigeenii Muxamed ahaa Ciise loo rogay, goormay Ogaden noqotay Somaliya!.
Waxaa kaliya oo aan Bucuuda odhan lahaa war dhafoorkuu ku yaal, inta aadan waa la hadlaa u hadlin horta baro dhulka iyo dadka aad ka hadlayso iyo waliba waxa aad ka hadlayso. Ogowna Jwxo-shiil laftigiisa Somalidii Ogadeeniya [dadkii] gardaadiyey ayaad doonaysaa in aad adigu gardaadisid, halgankii sharafta lahaa ee ay waday Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo], adiga iyo mid kula mid ahi ma habaabin kartaan oo laaximin maysaan!
Economic Downturn Hurts Remittances to Conflict Zones